FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA ANY NEWFOUNDLAND LANDSEER - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika any Newfoundland Landseer
Sary natolotry ny Ingrid Pakats
NAOTY: Any Etazonia sy Grande-Bretagne, ny Landseer dia raisina ho toy ny karazany iray ihany Terre-Neuve , na izany aza, any amin'ny firenena eropeana sasany, ny Landseer dia karazany hafa tanteraka noho ny Newfoundland. Ho an'ity karazany ity dia jereo ihany koa Terre-Neuve
Ny Landseer dia tokony hampita ny hevitry ny alika lava, mahery ary mahay mandanjalanja. Ny tongotra dia somary lava kokoa noho ny an'ny mainty Terre-Neuve , indrindra fa ny lahy. Ny Landseer dia kanto, mirindra, mailaka ary mafy. Fohy sy fohy toradroa kosa ny vava malalaka. Ny sofina kely sy telozoro dia pendant. Ny maso kely dia mainty volontsôkôlà, ny conjunctiva dia tsy tokony haseho toy ny any St. Bernard. Mainty ny orona. Ny tongotra dia atokana ho an'ny Internet hilomanosana tsara kokoa. Dewclaws dia tokony hesorina amin'ny tongony aoriana. Mihantona ny rambony. Ny palitao lava lava manohitra ny rano dia fisaka, misy menaka ary somary mikotrana miaraka amina palitao matevina. Ny alika mipetraka ao anaty trano anefa dia mazàna very ny palitao. Ny palitao ambony, ankoatry ny loha, dia tokony ho lava sy mahitsy ary matevina araka izay azo atao, malefaka amin'ny fikasihana, miaraka amin'ny akanjo ambany tsara, izay tsy matevina toy ny an'ny Newfoundland mainty. Ny palitao somary miforitra any aoriana sy any aoriana dia tsy maharikoriko. Rehefa borosina amin'ny fomba tsy mety dia miverina amin'ny toerana voajanahary izy io. Ny loko lehibe amin'ny palitao dia fotsy fotsy misy fika mainty miavaka amin'ny vatana sy ny croup. Fotsy, forechest, kibo, ranjo ary rambo dia fotsy. Mainty ny loha miaraka am-bava fotsy ary mifono simetrika fotsy.
Ny Landseer dia alika manana toetra miavaka, tsara, be herim-po, malala-tanana ary manan-tsaina. Alika marary ihany koa izy io, malemy fanahy amin'ny vahiny, ary manaraka azy amin'ny tompony. Izy dia mendri-kaja, tony, malemy paika, mahatoky ary mendri-pitokisana miaraka amin'ny toetra mahafinaritra. Mendri-kaja sy tia fihavanana. Tena mahafoy tena. Tsara sy be herim-po. Manan-tsaina ampy hihetsika samirery rehefa ilaina. Miaro, saingy mirona hametraka ny tenany eo anelanelan'ny mpiditra an-tsokosoko sy ny fianakaviany fa tsy hikitro na mimenomenona. Ireo tompon-trano dia afaka mahatsikaritra toe-javatra mampidi-doza ary amin'ny ankapobeny dia hihetsika izy ireo raha rahonana ny fianakaviana. Alika rehetra, biby hafa , zaza, na mpitsidika tsy manana fikasana ratsy dia horaisina an-tanan-droa. Ny lehilahy sasany dia mety ho mahery setra amin'ny lahy hafa raha tsy eo ny tompony hifampiresaka tsara amin'ilay alika fa fitondran-tena tsy ilaina ny manjaka. Manam-paharetana, milalao ary be fitiavana amin'ny ankizy. Tena tia fiaraha-monina. Ankafizo ny eny ivelany, fa mila fiarahana. Misotro rano be dia be i Landseer ary mety mikorontana amin'izany, satria tiany ho lena. izy ireo mirona amin-drool , na dia tsy betsaka toy ny sasany aza karazana goavambe . Na dia mila sakafo be dia be aza ny alika kely, ny Landseer lehibe iray dia tsy mihinana afa-tsy ny retriever ihany. Tian'izy ireo ny milomano ary raha miverina eo amoron'ny rano ny valizy dia aza avela hitondra ilay kitapo fatorianao ilay Landseer — na mety handany alina mando be ianao! Ity karazana ity dia mety ho somary sarotra hampiofana. Ireo alika ireo dia mora tohina amin'ny feon'ny feonao. Ny fampiofanana dia tsy maintsy atao ao a milamina, nefa mafy orina, matoky tena , mifanaraka ary fomba voalanjalanja . Ny vatana goavambe alika io dia mirona miadana kokoa. Raiso an-tsaina izany mandritra ny fiofanana.
Haavony: Lahy 28 ½ - 31 ½ santimetatra (72 - 80 cm) Vehivavy 26 ½ - 28 ½ santimetatra (67 - 72 cm)
Mora voan'ny dysplasia. Aza avela hanana tavy ny Landseer. Mora voan'ny aretim-po mandova antsoina hoe sub-aortic stenosis (SAS) ihany koa. Ireo mpiompy dia tokony hanamarina ny fon'ny alika kely an'ny mpitsabo aretin-tsaina ny biby amin'ny 8-12 herinandro. Ireo Landseers olon-dehibe dia tokony hodiovina amin'ny SAS indray alohan'ny hiterahana.
sheltie volamena retriever afangaro alika kely
Hanao tsara amin'ny trano iray raha toa ka ampy ny fampiharana. Tsy miasa intsony izy ireo ao anaty trano ary ampy ny tokotany kely. Mahatsapa hafanana izy ireo: omeo alokaloka sy rano mangatsiaka be izy ireo amin'ny toetr'andro mafana. Aleon'ireto alika ireto ny toetrandro mangatsiaka.
Ity goavambe malemy fanahy ity dia afa-po tokoa amin'ny fametahana trano, saingy mbola mila raisina a mandeha isan'andro . Na dia eny am-pandehanana aza ny alika dia tsy maintsy atao amin'ny sisin-tongony na ao ambadik'ilay olona mitazona ny firaka, toy ny ao an-tsain'ny alika ny mpitarika no mitarika ny làlana, ary ny mpitondra dia tokony ho olombelona. Hahafinaritra azy io matetika ny milomano sy mandehandeha.
Latsaky ny 10 taona
Ankizy 4 ka hatramin'ny 12 eo ho eo
Isan'andro ka hatramin'ny isan-kerinandro ny fanosorana ny palitao matevina, maditra, avo roa heny miaraka amin'ny borosy mafy dia zava-dehibe. Ny palitao dia alatsaka indroa isan-taona, amin'ny lohataona sy amin'ny fararano, ary mitaky fitandremana fanampiny amin'izao fotoana izao. (Ny vanim-potoana mavesatra indrindra dia amin'ny lohataona). Aza mandro raha tsy tena ilaina tokoa, satria esoriny ny menaky ny natiora. Fa kosa, shampooo maina indraindray.
Ny fiandohan'ny Landseer dia miverina any Alemana sy Suisse. Any Etazonia sy Grande-Bretagne, ny Landseer dia raisina ho toy ny karazany iray ihany Terre-Neuve , na izany aza, any amin'ny firenena eropeana sasany, ny Landseer dia karazany hafa tanteraka noho ny Newfoundland. Ireo mpandeha tany any Eropa dia manana tongotra lava kokoa noho ny Newfies Landseers tsy dia lehibe loatra, alika mpanao fanatanjahan-tena kokoa izy ireo. Amin'ny seho dia mifaninana izy ireo.
Terre-Neuve (Landseer) alika kely Willow amin'ny 6 herinandro
sarin'ny omby amerikanina
Terre-Neuve (Landseer) alika kely Willow amin'ny 7 herinandro
Jereo ohatra misimisy kokoa momba ilay Landseer
kilalao poodle cocker spaniel mix
sarin'ny alika kely mampifangaro shih tzu yorkie
sary husky husky
fanangonana basset sy fifangaroan'ny retriever volamena
Dikanteny cavalier mpanjaka Charles spaniel afangaro
st bernard pyrenees be afangaro